Iindaba - Umboniso weCIOSH 2021
ILockey izakuthatha inxaxheba kumboniso we-CIOSH obanjelwe eShanghai, China, nge-14-16th, Apr., 2021.
Inombolo Booth 5D45.
Wamkelekile ukusityelela eShanghai.
UMBUTHO WABASHISHINI BASE CHINA
I-China Textile Commerce Association (i-CHINA TEXTILE COMMERCE ASSOCIATION) ngumbutho ongajonganga nzuzo kushishino lukazwelonke ngemvume ye-Ofisi yoMphathiswa Wezemicimbi Yezoluntu phantsi kwesikhokelo se-State-Assets Supervision and Administration Commission ye-State Council.
Eyasungulwa ngo-2009, uMesse Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd. (MDS) yinkxaso kaMesse Düsseldorf GmbH, omnye wabaququzeleli abaphambili bemboniso. I-MDS izibophelele ekwaziseni ngemiboniso ekhokelela kurhwebo eChina kunye nokubonelela abathengi baseTshayina nabamazwe aphesheya ngeenkonzo zemiboniso ephezulu.
I-China International Occupational Safety & Health Expo Expo (CIOSH) ngumboniso wezorhwebo wesizwe obanjwa rhoqo entlakohlaza nasekwindla ngumbutho ukusukela ngo-1966. Ngentwasahlobo, iza kubanjelwa eShanghai; ekwindla iya kuba lukhenketho lwesizwe. Ngoku, indawo yomboniso ingaphezulu kwe-70,000 yeemitha zesikwere, ngaphezulu kwe-1,500 umboniso kunye neendwendwe ezingama-25,000 zobungcali.
Malunga nokhuseleko emsebenzini nempahla yezempilo:
Ukukhusela ubomi bokhuseleko lwabasebenzi kunye nempilo emsebenzini yeyona nto isisiseko kunye neyona nto ibalulekileyo kwimveliso ekhuselekileyo, ikwasisiseko semveliso ekhuselekileyo. Kwinkqubo yokuvelisa, umgaqo "ojolise ebantwini" kufuneka ulandelwe. Kubudlelwane phakathi kwemveliso kunye nokhuseleko, yonke into ijolise kukhuseleko, kwaye ukhuseleko kufuneka lubekwe kuqala. Ukhuseleko emsebenzini nempahla yezempilo (ekwabizwa ngokuba "sisixhobo sokhuselo lobuqu", isifinyezo sehlabathi "iPPE") sibhekisa kwizixhobo ezikhuselayo ezinikezelwa ngabasebenzi ukunqanda okanye ukunciphisa ukulimala ngengozi okanye iingozi zomsebenzi kwinkqubo yemveliso. Ngamanyathelo okuthintela, ukutywina, ukufunxa, ukusasaza nokumisa, inokukhusela ilungu okanye wonke umzimba kugonyamelo lwangaphandle. Ngaphantsi kweemeko ezithile, ukusetyenziswa kwezixhobo zokukhusela kuyeyona nto iphambili yokukhusela. Iimveliso ze-PPE zahlulwe zaziimveliso zokukhusela abasebenzi ngokubanzi kunye neemveliso zokhuselo lwabasebenzi.
Malunga neendidi zomboniso:
ukhuselo lwentloko, ukhuseleko ebusweni, ukhuseleko kwamehlo, ukhuseleko kwindlebe, ukhuseleko lokuphefumla, ukhuseleko lwesandla, ukhuseleko lweenyawo, ukhuseleko lomzimba, ukhuseleko oluphezulu, izixhobo zokuhlola, izilumkiso zokhuseleko kunye nezixhobo ezinxulumene noko, isiqinisekiso semveliso, uqeqesho ngokhuseleko, njl.